Al-Shabaab oo ku faantay in ey u aargudeen Dhalinyaro dhawaan Meydadkooda laga helay Muqdisho |
Al-Shabaab oo ku faantay in ey u aargudeen Dhalinyaro dhawaan Meydadkooda laga helay Muqdisho
Al-Shabaab ayaa bayaan ee soo saareen waxa ee ku sheegeen in ee u aargudeen laabtana u qaboojiyeen Waalidiintii dhalay dhalinyaro maalmo kahor Meydadkooda laga helay Magaalada Muqdisho kuwaa oo la tuhmayo in Al-Shabaab katirsanaayeen kuna baxeen gacanta Ciidanka Nabad Sugida.
Bayaanka Al-Shabaab ayaa lagu qirtay Masuuliyada Weerarkii shalay ee ku dhamaadeen dad badan oo shacab ah ee ku jireen Wariyaal iyo Arday iyadoona ninkii ee Shabaab doonayeen in weerarkaasi ku dilaan uu ka badbaaday.
Warka kasoo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarkii shalay uu aargudasho u ahaa dilalkii foosha xumaa ee lagula kacay dhalinyaro ee Shabaabku sheegeen in lagala soo baxay Xabsiyo ee ku xirnaayeen kadibna la dilay meydadkoodana lasoo dhigay xaafado ka,mid ah Muqdisho.
“Mar horena waan sheegnay, haddana Alle fadligiis waan fulineynaa, dhiiggii dhalinyarada reer Muqdisho waa masuuliyad dusheena saaran, howlgalkii shalay wuxuu aargudasho u ahaa tacaddiyadaas foosha xun” ayaa lagu yiri bayaankan Al-Shabaab kasoo baxay.
Dad badan ayaa isweediinaya Al-Shabaab hadii eey u aargudayeen dad Shacab ah yey ka aar guteen ma dadkii shacabka ahaa ee Masaakiinta ahaa ee shalay laayeen ayaa aar gudasho u ah dhalinyaro maalmo kahor Muqdisho lagu dilay.
Al-Shabaab ayaan inta badan ka ganban leynta Shacabka Masaakiinta ah ee ku dilaan Qaraxyada iyadoona Dhoorkii Weerar ee Qaraxyo ah AL-Shabaab fuliyeen ku laayeen dad badan oo Shacab ah kana badbaadeen dadkii ee la doonayeen in ee waxyeelada Shabaabku gaarsiiyaan.